जोशीले तोके सर्वोच्चमा पेशी, अब गोपाल पराजुलीले के गर्लान् हेर्दै जाम ! – Superhit News
जोशीले तोके सर्वोच्चमा पेशी, अब गोपाल पराजुलीले के गर्लान् हेर्दै जाम !
March 15, 2018 superhit news0Comments
काठमाडौँ । न्यायपरिषदले प्रधानन्याायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पदमुक्त भएको पत्रचार गरेसँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक जोशीले कायम मुकायमको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पेशी सूची तोकेका छन् । जोशीले आफुलाई एकल इजलाससहित अन्य न्यायाधीशलाई पेशी तोकेका हुन् ।
जोशीले न्यायायधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, टंकबहादुर मोक्तान, चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, डम्बरबहादुर शाही, दीपककुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठ, केदारप्रसाद चालिसे र पुरुषोत्तम भण्डारी, शारदाप्रसाद घिमिरे र सपना मल्ल प्रधानलाई पेशी तोकेका हुन् ।
त्यस्तै मीरा खड्का र प्रकाशमान सिंह राउत, हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलास तोकिएको सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेशी सूचीमा उल्लेख छ ।
अरु दिन १० बजेपछि मात्रै तोकिने पेशी विहिबार भने चाँडै तोकिएको हो ।
न्यायपरिषदले पराजुलीलाई बुधबार उमेरहदका कारण पदमुक्त भएको पत्र थमाएपनि पराजुलीले भने त्यसलाई अवैधानिक भन्दै मान्य नहुने बताएका छन् । उनले बिहीबार पनि आफु कार्यलय पुगेर आफ्नो कामलार्य निरन्तरता दिने बताएका छन् ।
उता, कामु प्रधानन्याधीश जोशीलाई स्वागत गर्न सर्वोच्चका कर्मचारीहरु तयारी अवस्थामा बसेका छन् ।
← हकिङ्ग : जसले ह्वीलचेयरबाट ब्रम्हाण्डको यात्रा गरे